Vaovao - Fampandrenesana ny taona vaovao
Ny 12 febroary no taom-baovao sinoa, ny orinasan-tsika dia hanana fialantsasatra iray volana, ka mandritra izany ny famokarana tsy harindra. Ka hitatra araka izany ny fotoana fandefasana. Azafady mba alamino araka ny antonony ny fotoana hividianana entana hisorohana ny olana tsy voafehy.
Tamin'ny taona 2021, tsy azo ihodivirana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fanitarana ny bisikileta elektrika, saingy matokia ianao fa tsy hampihena ny kalitaon'ny vokatray amin'ny fisorohana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny kalitaon'ny vokatra dia fepetra ilaina hatrany amin'ny fahaveloman'ny orinasanay, tsy misy antony hampihenanay ny kalitaon'ny vokatra.
Ny fametrahana ny vokatra anay no vokatra lafo indrindra. Tsy mamokatra vokatra misy vidiny ambany izahay, ary tsy mamokatra vokatra amin'ny vidiny avo indrindra. Ny vokatray no lehibe indrindra amin'ny tsena ary ny vidiny mirary indrindra.
Hividy fitaovana manta amina kalitao ampy izahay hisorohana ny olana aorian'ny fivarotana be loatra. Hiezaka mafy araka izay azo atao izahay mba hahatonga ny mpanjifanay hahazo tombony tsara indrindra ary hanao ny fanohanan'izy ireo mafy.
Mandritra ny fialantsasatry ny ozinina dia hiasa mandritra ny fotoana rehetra ny biraon'ny varotra iraisam-pirenena ary hanompo ny mpanjifa 24 ora isan'andro. Raha manana fanontaniana ianao dia miantso azafady na alefaso aminay mivantana ny hafatra, ary hamaly anao izahay raha vao haingana.
Azontsika atao koa ny mifanakalo hevitra momba ny antsipirian'ny kaomandy ary manapa-kevitra ny filaharana farany mandritra ny fialantsasatry ny ozinina, mba rehefa manomboka miasa ny atrikasa dia afaka alaminay mialoha ny famokarana ny kaomandinao.